Ahụkarị nri Aguascalientes: njikọ nke gastronomy Mexico | Akụkọ njem
Nri pụrụ iche nke Aguascalientes
Louis Martinez | | Gastronomy, Mexico
La nri Aguascalientes ọ bara ọgaranya nke ukwuu na iche iche. Nke a na-abụkarị n'ihi akụkọ ihe mere eme nke steeti Mexico, kamakwa n'ọtụtụ ngwaahịa nke ọrụ ugbo ya na usoro nna nna ya malitere n'oge ndị Columbian.
Ọnọdụ mbụ anyị kpọtụrụ aha metụtara eziokwu ahụ bụ na e hiwere Aguascalientes ka ọ bụrụ nkwụsị na ụzọ jikọtara mpaghara etiti na isi obodo. Viceroyalty nke New Spain, ya bụ, na Mexico City n'onwe ya (lee, anyị na -ahapụrụ gị akụkọ gbasara obodo a), wuru na ochie Tenochtitlan. Ọ bụ nnukwu mpaghara nke nwere ihe ndị Hispanic nke North America, mpaghara etiti kọntinent ahụ, na ọbụna agwaetiti Cuba na ndị nọ ya nso. Mana, n'agaghị n'ihu, anyị ga -agwa gị gbasara ihe niile metụtara nri Aguascalientes.
1 Nri pụrụ iche nke Aguascalientes: njikọ Mexico
1.1 Ọdịdị nke Aguascalientes na mmekọrịta ya na kichin
1.2 Nri pụrụ iche nke Aguascalientes
1.2.1 Ọkụkọ San Marcos
1.2.2 Avocado-ụdị stuffed ose
1.2.3 Menudo, nri nri Aguascalientes ọzọ ị ga -anwale
1.2.4 Ihe birria
1.2.5 Ahịhịa na -a suụ ara
1.2.6 Gorditas ahụ juru
1.2.7 Ihe na ato uto
1.2.8 Ahụkarị ihe ọ ofụ ofụ nke Aguascalientes
Nri pụrụ iche nke Aguascalientes: njikọ Mexico
Site n'ihe anyị kọwara ugbu a, ụdị nri Aguascalientes bụ njikọ nke gastronomy Mexico. Ọ bụ eziokwu na a na -eme ya n'ụzọ ụmụ amaala ma na -agbakwunye ihe ndị ọzọ. Mana, tupu anyị agbado anya na nri nri steeti a, ka anyị kwuo ntakịrị gbasara akụkọ ya na ọpụrụiche ya. Ọ bụghị n'efu, gastronomy, ala na mmalite akụkọ ihe mere eme nwere njikọ chiri anya.
Ọdịdị nke Aguascalientes na mmekọrịta ya na kichin
Ọdịdị nke Aguascalientes
Dịka anyị na -ekwu, e hiwere Aguascalientes ka ọ bụrụ nkwụsị na ụzọ ọlaọcha, nke jikọtara ogbunigwe nke Zacatecas ya na Mexico City. Ọ dị ntakịrị n'ebe ugwu nke mpaghara Na-emighị emeli, nke na -agwakọta nnukwu ala dị larịị na mbara ọzara na ugwu ruru elu puku puku abụọ.
Ọ bụ mpaghara na -eme nri nke ọma, yabụ na o wereghị ndị ọrụ ugbo na ndị ahịa ka ha biri ebe ahụ, wee mepụta ngalaba ọrụ ugbo na -aga nke ọma. Ekele ya, na mgbakwunye, gastronomy nke mpaghara ahụ bara ọgaranya.
Ọnọdụ ihu igwe nke Aguascalientes n'onwe ya nyere aka nke ukwuu. Ọ na -enye okpomọkụ dị ala n'afọ niile, yana nkezi gburugburu 17 Celsius. Ha anaghị agbadakarị n'okpuru ise ma ọ bụ gafere iri atọ. N'aka nke ya, mmiri ozuzo dị ụkọ, mana o nwere osimiri, mmiri mgbochi mmiri na usoro ịgba mmiri oge ochie na -edozi ọnọdụ a.
Nsonaazụ ihe a niile bụ ọrụ ugbo na -emepụta ihe ọka, ọka, chili, poteto, tomato, ube oyibo, mkpụrụ vaịn na agwa, tumadi. Akwụkwọ nri ndị a niile dị na gastronomy nke Aguascalientes, yana anụ nke ngalaba anụ ụlọ ya siri ike mepụtara. Mpaghara ahụ nwere nnukwu ehi na anụ ezi, kamakwa ewu na atụrụ.
Ozugbo anyị gwara gị maka akụrụngwa nke nri Aguascalientes na ọnọdụ akụkọ ihe mere eme ya, anyị ga -elekwasị anya na efere ya, nke ị ga -ahụ n'anya.
Na steeti na ọkachasị n'isi obodo ya, ọdịnala nri abalị, nke, dị ka aha ya na -egosi, na -eje ozi n'ụdị dị iche iche nri nri maka nri abalị. N'aka nke aka, ndị a bụ obere servings nke tacos, enchiladas, flautas, tamales, tostadas ma ọ bụ pozole, ya bụ, nkwadebe ọdịnala na Mexico niile. Mana njirimara nke Aguascalientes bụ efere anyị ga -ekwu maka ya n'okpuru.
Ọkụkọ San Marcos
A na-akpọkwa ya Aguascalientes ọkụkọ, bụ otu n'ime efere ọdịnala steeti. A na -akwadokarị ya, dị ka aha ya na -egosi, n'ime FMpaghara San Marcos, nke a na -ewere dị ka ihe kachasị mkpa na Mexico. Ememe a malitere na 1828 wee na -eme na mpaghara hectare iri itoolu.
Otu n'ime ihe kacha amasị ya bụ Asọmpi National Charrería na mmemme egwu. Mana akara ngosi ya bụ Ogige San Marcos, ọmarịcha ngagharị nke nwere balustrades ebe a na -eme ọtụtụ ihe ngosi.
Mana, ịlaghachi na ọkụkọ Aguascalientes, a na -akwadebe ya site na ighe anụ ahụ wee tinye ihendori ejiri mkpụrụ osisi mee. Nke a bụ ihe ịtụnanya dị ụtọ nke na -egosipụta shuga, pawuda, piich, pears, tomato, na aprịkọt. Mgbe ahụ, a na -esikọ ihe niile ọnụ, na -adịkwa njikere nri.
Avocado-ụdị stuffed ose
Aguacala chili ose
El Chile Ọ bụ isi ihe dị na gastronomy Mexico. A na -eri ụdị ose a na mba niile. Mana Aguascalientes nwere ụzọ ọ na -esi eme ya nke mere ka ọ dị iche na mpaghara ndị ọzọ.
Iji malite, ọ bụ nnukwu chili a na -awụpụ n'ime ya jupụta. Ngwaahịa ejiri mee nke a bụ anụ ehi na anụ ezi, yabasị, biznaga, galik na guava nke na -enye ya mmetụ dị ụtọ. N'ihi na otu njiri mara agwa aguacalestense bụ nke ahụ adịghị oko.
Menudo, nri nri Aguascalientes ọzọ ị ga -anwale
Agbanyeghị na ọdịdị ya nwere ike nye gị nsogbu ụfọdụ, anyị na -emesi gị obi ike na menudo bụ nri na -atọ ụtọ nke ị ga -anwale ma ọ bụrụ na ị gaa Aguascalientes. Ọ bụ nha nke anyị kpọọ, ma jiri nkwadebe dị iche iche.
N'ezie, o nwere akụkụ nke afọ ehi, kamakwa ọkpụkpụ, ụkwụ, yabasị oregano, galik, ose chili akpọnwụ na tomato. Na ihe a niile, ofe mara dị ka afọ efere. Yabụ, enwela nkụda mmụọ mgbe ị bịara ịnụ ụtọ ụtọ a.
Birria, nri pụrụ iche nke Aguascalientes
Nke a bụkwa efere anụ. A na -eji anụ atụrụ ma ọ bụ anụ ezi esiri ya n'ọkụ. Mgbe ahụ tinye coriander, yabasị na ose chili. Site na ihe ndị a na ihe ọ juiceụ thatụ na -esi n'anụ ahụ, a na -akwadebe ofe nke a ga -etinye tomato na ya.
Mana ihe ga -eju gị anya bụ isi nri ya. A na -eme ya n'ime akpa igwe a na -etinye n'ime olulu mmiri juputara na ọkụ nkụ. A na -etinye akwụkwọ Maguey na ala n'elu ma hapụ ya ihe dị ka awa anọ. N'ikpeazụ, a na -etinye anụ ahụ na ofe ahụ e kwuru n'elu wee soro ya Ọka ọka. Na nkenke, nri na -atọkwa ụtọ.
Ahịhịa na -a suụ ara
Carnitas ezi na -a suụ ara
N'ezie, ezi na -ackụ ara ma ọ bụ ezi ezi bụ ihe ịtụnanya gastronomic nke a na -eri gburugburu ụwa. N'agaghị n'ihu, efere a bụ ama ama na Castile niile (nke a bụ akụkọ gbasara obodo Toledo nke Castilian). Mana ndị Aguascalientes nwere ụzọ pụrụ iche ha si ewere ya.
Ozugbo anụ ahụ ghere eghe, a na -egwepịa ya wee nye ya guacamole agwakọta ya na ihe ọ juiceụ firstụ mbụ n'onwe ya. Ozugbo emere nke a, ha na -eri ya na efere ma ọ bụ n'ime taco. Dị ka ị maara, nke a bụ a tortilla ọka juru eju ma kechie ya. Dịka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga -agwakwa gị na ụzọ ikpeazụ a na -eri ya na -abụkarị ịkwụsị oriri abalị, mgbe oge ruru ịla n'ụlọ.
Gorditas ahụ juru
Nri a sitere na nri n'okporo ụzọ, dịka ụdị burritos ma ọ bụ, kpọmkwem, na tacos. Agbanyeghị, ọ bụrụla nri pụrụ iche nke gastronomy nke Mexico n'ozuzu yana nke Aguascalientes.
A na -ejikwa achịcha ọka eme ya n'ụdị tortilla. Mgbe ahụ, a na -eju ya anụ ezi, ọkụkọ ma ọ bụ anụ ehi na tanning. Nke ikpeazụ bụ salad mara mma nke a na -akwado yabasị, mmanya, kabeeji na karọt. N'ikpeazụ, a na -etinye ihendori dị ụtọ ma ọ bụ oseose ka ọ dabara onye nri abalị.
Ihe na ato uto
Mkpụrụ osisi Guava
Sweets dị ezigbo mkpa na nri Aguascalientes. N'ime ha, anyị nwere ike ịkọwa gị ude na butter mpịakọta, ọ mkpụrụ osisi condoche na aki oyibo grated ma ọ bụ shei, nke bụ achịcha dị ụtọ dị iche iche.
Agbanyeghị, anyị chọrọ ịgwa gị okwu ahụ guava chiiz flan maka ịbụ ihe na -atọ ụtọ n'ezie. Ihe mejupụtara ya bụ àkwá, mmiri ara ehi a gwakọtara agwakọta, caramel na cheese cheese. Mana onyinye mbụ nke mpaghara ahụ bụ guava, mkpụrụ osisi mara mma nke na -eto n'ụba na Aguascalientes.
Ahụkarị ihe ọ ofụ ofụ nke Aguascalientes
Otu iko mead
Anyị enweghị ike mechaa njem nlegharị anya nke nri Aguascalientes na -agwaghị gị gbasara ihe ọ drinksụ theirụ ha. N'etiti ndị na -enweghị mmanya, anyị na -adụ gị ọdụ ka ị nwalee ahihia, nke a na -amịpụta na maguey, osisi ọzọ a na -ahụkarị na mpaghara ahụ. Na kwa ya Ụtọ dị ụtọ, nke e ji mkpụrụ vaịn, pawuda na shuga mee.
N'akụkụ nke ya, n'etiti ihe ọ alcoụ alcoụ na -aba n'anya ị nwere brandi, mmanya ogbugbu sitere na mkpụrụ osisi na brandi. Mana nke kachasị, nke ahụ eriri afọ, a na-akpọ abalị.
Ọ bụ mmanya na-aba n'anya tupu Columbian nke a na-eme site na ịgba ụka nopal na pears ndị ọzọ na-egbu egbu. Dịka, nke ube na -acha uhie uhie, yabụ ihe ọ drinkụ theụ nwere agba a. Iji mee nke a, a na -esi ihe ọ juiceụ ofụ nke osisi ndị a esi awa abụọ ma ọ bụ atọ wee hapụ ya ka ọ gbaa ụka ruo ọtụtụ ụbọchị. Ihe si na ya pụta bụ nectar na -atọ ụtọ, nke na -atọ ụtọ nke ukwuu.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ nri Aguascalientes, steeti Mexico nwere nri na -atọ ụtọ nke na -ejikọkwa akpaaka na mmetụta sitere na mpaghara ndị ọzọ nke mba ahụ. Agbanyeghị, anyị nwere ike ịkọ ọtụtụ usoro nri ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, pocholas, nke a na -eji anụ ọkụkọ ala a gwakọtara ọnụ dị ka steak wee were agwa na osikapa nye ya. Ma ọ bụ kwa obi ebere na morita chile sauce, nke bụ anụ ezi na -eso ya na ụdị ofe chili nke nwere nsọpụrụ na a na -ewere ya dị ka efere kacha dị ụtọ na steeti ahụ. Na nkenke, efere ọzọ nke nri Aguascalientes bụ tatemada anụ, nke nwere ose chili na ahumachi na, mgbe ọ mịchara, a na -eji osikapa, agwa na, n'ezie, achịcha ọka. Ị cheghị na ha bụ nri na -atọ ụtọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Mexico » Nri pụrụ iche nke Aguascalientes
Ekike mpaghara mpaghara Galician